क्रिकेट रङ्गशालाको काम ठ’प्प।के भन्छन् धुर्मस सुन्तली?:: Mero Desh
क्रिकेट रङ्गशालाको काम ठ’प्प।के भन्छन् धुर्मस सुन्तली?
Published on: २९ भाद्र २०७८, मंगलवार ११:३०
भरतपुर चितवन।चितवनको भरतपुरमा बनिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा अहिले काम ठप्प छ । साउन १५ गते यता त्यहाँ निर्माणका काम केही पनि भए को छैन । खेल मैदानमा दुबो रोप्ने र सामान्य आन्तरिक कामबाहेक अरु बन्द छन् । सबै कुरा ठीकठाक भएर पनि
योजना अनुसारै काम भइदिएको भए यतिखेर रंगशाला” तम्तयार भएर भरतपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने हो । तर, भरतपुर–१५ मा निर्माण भइरहेको यो रंगशालामा अहिलेसम्म करिब ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ बाँकी कुन ढंगले कहिले हुने अन्यौल छ ।
निर्माणको स्वतःस्फूर्त अगुवाइ गरेको सा”माजिक संस्था धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले भरतपुर महानगरसँग निर्माण थालेको २ वर्षभि”त्र बनाएर ह”स्तान्तरण “पनि गरि सक्ने सम्झौता गरेको थियो । “फाउण्डेसन र महानगरपालिका बीच २०७५ माघ १६ गते शहीद दिवसको “अवसर पारेर सम्झौता गरिएको थियो ।
सम्झौता भएको आगामी माघमा ३ वर्ष पुग्दैछ ।रंगशाला उधारो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । परियोजनाले अहिले सम्म गरेको “५४ करोड ६२ लाख २१ हजार १३ ” रुपैयाँ खर्चमध्ये करिब १६ करोड २ लाख त बक्यौता नै छ । अहिलेसम्म अनेक अभियान चलाएर उठेको
रकम ३८ करोड ५९ लाख ३२ हजार ७ सय ४१ रुपैयाँ मात्रै भएको रंगशाला निर्माण परियोजनाका आर्थिक प्रशा सन शाखाका मुक्ति तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । अहिले हामीसँग नगद मौज्दात कत्ति पनि छैन’, उनले भने,‘काम सबै रोकिएका छन् ।’ रंगशाला पूरा बनाइसक्न करिब ३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक स्रोत खोज्दै सरकार सामू फा”उण्डेसनले अहिले आर्थिक सहयोग नै लिन छोडे”को छ । सुरुआतमा जुन” गतिमा सहयोग जुटेको थियो, अहिले त्यो छैन । रंगशाला को काम अघि बढाउने कुनै उपाय नभएपछि अहिले परियो जनाले सरकारको साथ खोजेको छ आर्थिक स्रोत जुटाउन
“अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावना लिएर गएको फाउण्डेसन का अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुस”ले बताए ।‘हामीसँग पैसा” छैन’, उनले टेलिफोनमा भने,अहिले जनता”सँग हात थाप्ने अवस्था पनि रहेन,आखिरीमा सरकार कै सम्पत्ति हो, हामी त बनाइदिने खेताला न हौं ।जसले बनाए पनि राष्ट्रकै लागि
रंगशाला बन्ने हो । अब सरकारले आफ्नो योजनामा पार्नु पर्छ, स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।’रंगशालाका लागि व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूप मा स्वतःस्फूर्त दिइएका सहयोगबाहेक धनधान्याचल महायज्ञ पनि गरिएको थियो । त्यही पैसाबाट अहिलेसम्म काम गर्न सजिलो भएको थियो ।त्यही गति मा
सहयोग आइरहने आशामा उधारोमा काम गरिएको थियो । तर,बिस्तारै सहयोग घट्दै गयो ‘बीचमा को-भि’ड महामारी आएपछि सबैको आर्थिक अव”स्था चौ’पट भयो’, कट्टेलले भने,‘यस्तो बेला जनतालाई कसरी सहयोग गर भन्नु कट्टेल को प्रमुख टाउको दुखाइ बक्यौता नै बनेको छ । १६ करोड भन्दा बढी आर्थिक दायित्व लिएर पनि काम अघि बढाउन’
सकिएन उनले भने,‘कतिलाई फकाइयो,कति लाई ढाँटियो भनिसाध्यै छैन ।’अब यो दायि”त्वको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषय गम्भीर भएको उनले बताए निर्माण यस्तो चरण मा पुग्यो कि दुईचार पैसा उठाउँदै गरौँ, बना”उँदै गरौँ भन्ने’ अवस्था अब छैन उनले भने,लाखले नहुने क”रोडौँ चाहिने भएको छ ।’
सबैको साथ र सहयोग भयो र स्रोत जुट्यो भने ६ महिना देखि १ वर्षसम्ममा पूरैसंरचना नै ठ’डिन सक्ने उनले बताए । तर, सहयोग जुटेको अहिले सम्मको अ”वस्था हेर्दा त्यसो भइहाल्ने देखिँदैन । ‘यति धेरै बक्यौ”ता तिर्ने मेरो सामथ्र्य” छैन’, उनले भने, ‘मैले त सरकारलाई नै गुहार्ने हो, किनकि हिजो सरकारकै उपस्थि”तिमा घोष”णा भएको हो, जवाफ देही सरकार पनि हुनुपर्छ ।’
महानगर भन्छ‘धुर्मुस सुन्तलीले नसके सरकारले बनाउँछ’ रंगशाला का लागि ‘आवश्यक सबै रकम उठाउने जिम्मा फाउण्डेसनले नै लिएको हो । यो कुरा सम्झौतामा स्पष्टै छ भरतपुर महानगरपालिकाले भरतपुर१५ मा जग्गा उपलब्ध गराएको हो । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल रंगशालाको काम ढिला भएकोमा असन्तुष्ट देखिन्छिन् ।